Inkonzo yeVISA eyiNtloko kunye noMthengisi | Hongyu
Inkqubo yesi-7 yesiZukulwana se-VISIA® yoHlalutyo lweSikhumba ihambisa amava aphuculweyo ngokubonakalayo kunxibelelwano lobuhle nolusu. Imodyuli yokufaka entsha esandula ukujikeleza ijikeleza kakuhle ukujikeleza umxholo, yenza lula inkqubo yokucinga ngelixa ibonelela ngomxhasi ngakumbi. Isoftware ehlaziyiweyo ivumela ukubanjwa ngokukhawuleza komfanekiso ngohlobo lodidi oluzenzekelayo, ukubonwa kobuso obuhlaziyiweyo nokunye okuninzi.
"Qhubeka ube yinkulumbuso kumboneleli weenkqubo zokufota zedijithali, isoftware yokucinga, kunye neenkonzo zenkxaso ezinxulumene noko ukunceda abaqeqeshi bezempilo ekuphuculeni unxibelelwano lwezigulana kunye nokulawula iziphumo zonyango."
"Ukubonelela ngowona mgangatho uphezulu, umgangatho wobugcisa, izisombululo zokucinga kumagqirha nakwishishini lokhathalelo lwempilo, exhaswa yinkonzo yabathengi engazange ibonwe ngaphambili."
"Njengombutho wenkulumbuso weenkonzo zekhontrakthi yokucinga ngezonyango, sizakuqhubeka nokubeka imigangatho yegolide kumaxwebhu kunye nohlalutyo lweziphumo zeklinikhi zokumisela ukusebenza kweziyobisi nemveliso kwizigulana."
"Ukubonelela ngezixhobo zokufota kunye nokucinga, iindlela, kunye neenkonzo eziyimfuneko ukuxhasa inkqubo yokuvelisa imveliso yezamachiza, i-bio-tech, kunye nezixhobo zonyango kumzi mveliso wanamhlanje olawulayo."
UkuTshintshwa koThengi oluThengiweyo
Njengenkampani yetekhnoloji, senza izinto zeetekhnoloji ezihamba phambili ngokwethu kwaye sisebenzisana nomzi mveliso, izifundiswa, kunye namaziko ophando ukusombulula iingxaki ezinzima.
Siyakholelwa kubambiswano lwabathengi olungenamthungo oludibanisa thina njengeqela elimanyeneyo ukuze sisebenzisane kwizisombululo ezitsha zokunceda ukukhulisa ishishini lakho nokukuhlula kukhuphiswano lwakho.
Sithatha iqela elincinci, indlela yokwenza izandla ngokukhawuleza ukucwangcisa, iprototype, iterate, kunye nokufezekisa iziphumo zokuphumelela.
Inkqubo yokuKhangela ebusweni yoPhando lweKlinikhi
Ngamaxesha okubamba ngokukhawuleza kunye neemowudi zokukhanyisa eziyilelwe ukukhulisa ukubonwa kweempawu zesikhumba, i-VISIA®-CR ngumgangatho ekuphindaphindweni kweklinikhi yokucinga. Umdibaniso ongenamthungo neVAESTRO® yoVavanyo lwezixhobo zeZithombe zibonelela ngesisombululo sohlalutyo lolusu kuye nawuphi na umphandi.
1, isikhundla sangaphakathi kunye nokukhanya okuqhelekileyo ukuqinisekisa ukuba iimeko zomfanekiso ngamnye ziyahambelana kwaye ziyaphinda.
2, imifanekiso eyahlukeneyo yokubonisa: ukusetyenziswa kokukhanya okumhlophe okumhlophe, ukukhanya kwe-cross-section ukukhanya kwe-polarization kunye nokukhanya kwe-ultraviolet kwimifanekiso ye-multispectral yokulinganisa umphezulu wolusu kunye neemeko ezingaphantsi.
3. Itekhnoloji yeRBX Itekhnoloji entsha yeRBX ibonelela ngendlela entsha engaqhelekanga yokufumana, ukujonga kunye nokuhlalutya i-pigment engaphantsi kunye nemithambo yegazi.